LEGO သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၀၂၉၁ Queer Eye Apartment သတ်မှတ်သည်
13 / 09 / 2021 13 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 225 Views စာ0မှတ်ချက် 10292 အဆိုပါ Friends Apartments, 21319 ဗဟို Perk, ၂၁၃၂၈ Seinfeld, 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ, Creator Expert, Ideas, Lego, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Ideas, Lego ကောလာဟလများ, မဲ Ashton, Netflix နဲ့, Queer မျက်လုံး, ကောလာဟလာ, အဆိုပါ LEGO Group, တွစ်တာ
အဆိုပါ Lego Group သည်ကောလာဟလသတင်းများဖြစ်ရန်သေချာနေသောကြေငြာချက်ကိုနောက်ပြောင်လိုက်သည် လူကြီးများအတွက် Lego ၁၀၂၉၁ Queer Eye Apartment ။
၉၇၄ အပိုင်းအစအသေးစိတ်ကိုအွန်လိုင်းတွင်ပထမဆုံးရောက်ရှိလာသည် သြဂုတ်လစက်တင်ဘာလမိတ်ဆက်ပွဲကိုညွှန်ပြသောသတင်းများနှင့်အတူ ယခုကဲ့သို့အရာအားလုံးသည်အာမခံချက်ရှိသည် Lego Group သည်၎င်း၏အလွန်ပြောသောပုံလေးပုံကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် တွစ်တာအကောင့်.
ကတ်ကြေးများနှင့်အနီရောင်ဘေ့စ်ဘော ဦး ထုပ်သည် Queer Eye သို့အထူးတလည်ထိုးရန်အနည်းငယ်ယေဘူယျအားဖြင့်ခံစားရသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဖက်ရှင်ကိုအဓိကထားသော Netflix show ကို အခြေခံ၍ set ၌တွေ့ရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ နှာခေါင်းကိုနည်းနည်းပိုစားပြီးဝိုင်နဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ Antony Porowski ရဲ့နာမည်ကြီးအသီးကိုစွဲလမ်းသည်။
အလွန်လှပတဲ့ပျားရည်! ? pic.twitter.com/gXSpAi9XDp
- Lego (@LEGO_Group) စက်တင်ဘာလ 13, 2021
သို့သော်အစောပိုင်းကောလာဟလများကိုအတည်ပြုခြင်းမှာယခင်ကအထူးပြုလုပ်ထားသောဆံပင်ပုံစံဖြစ်သည် 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ ဒီဇိုင်နာ Matthew Ashton ကျီစား အရောင်အသစ်တစ်ခုနဲ့ထပ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်မီးခိုးရောင်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဖက်ရှင်ပညာရှင် Tan France အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
၁၀၂၉၁ Queer Eye Apartment (ယင်း၏နောက်ဆုံးနာမည်ဖြစ်လျှင်) သည်ပေါင် ၉၉.၉၉ ဖြင့်လာမည်၊ ယခင်တီဗီများကဲ့သို့ခြေရာကိုလိုက်လိမ့်မည်။ 21319 ဗဟို Perk, 10292 အဆိုပါ Friends Apartments နှင့် ၂၁၃၂၈ Seinfeldမရ။ ယခုမည်သည့်နေ့၌အပြည့်အဝထုတ်ဖော်ပြောကြားရန်မျှော်လင့်ပါ။
← LEGO ကိုအနိုင်ရဖို့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး Creator Expert 77942 Fiat 500 နှင့်အတူ Brick Fanatics
Lego Marvel 76200 Bro Thor ၏ New Asgard ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း →